मनिषा कोइरालालाई नेपाली कलाकारको साथ – Namaste Filmy
कलाकारहरु रामकृष्ण ढकाल, सत्यराज आचार्य, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, मनोज गजुरेल, करिष्मा मानन्धर लगायतले मनिषालाई साथ दिएका हुन् ।
“मनिषा जी ! मेरो मनकै कुरो बोल्नुभयो । सलाम छ तपाईंलाई । भौतिक शरीर जसको जहाँ भए पनि मन भने नेपालमै हुन्छ भन्ने कुरा मनिषा जीवाट प्रमाणित भएको छ,” गायक रामकृष्ण ढकालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “सत्यमेव जयते । हामी तपाईंको साथमा छौं । सानो होस् ठूलो होस् देश आखिÞर देश नै हुन्छ । जय नेपाल जय वीर गोर्खाली ।”
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले पनि मनिषाको पक्षमा बोलेका छन् । उनले भारतीय सञ्चार माध्यमको प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरेका छन् ।
“मनिषा कोइराला मात्र होइन, इन्डियन मिडियाले अब हामी सबैलाई लखेट्नेछन्, जो उनीहरुको स्वार्थ बिरुद्ध सत्य ओकल्छन्,” उनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, “त्यसैले राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै नेपाली एक हुनु जरुरी छ । यो पक्ष–विपक्षको टम एन्ड जेरी खेल्ने बेला होइन । सिमाना संबन्धमा सरकारको धारणा नै नेपाली जनताको धारणा हुनुपर्छ ।”
गायक सत्यराज आचार्यले मनिषाको सहासको कदर गरेका छन् । उनले भारतमा काम गरेको भन्दैमा नाजायज कामको पनि समर्थन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
भारतमा मनिषाले आफ्नो मेहनत र प्रतिभाले स्टारडम कमाएको भन्दै उनी आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्, “मनिषा जी जस्ता हजारौं अनि लाखौंले प्रत्येक दिन त्यो माया नगरीमा आफ्नो भाग्य उज्यालो बनाउन आफूलाई आजमाउँछन् र अधिकांश त अन्धकारमै बिलिन हुन्छन् तर मनिषा अन्धकारमै हराउने कालो रङ्गको साटो अन्धकार हटाउने सेतो प्रकाश बनिन् । त्यो पनि उनले आफ्नो कठोर मेहेनत, संघर्ष र भाग्यको कारणले प्राप्त गरेकी हुन् । यदि त्यो स्थान हासिल नगरेकी भए भारतले के फोकटमा उनलाई ख्वाएर राख्थ्यो र ? एक गाँस खाना त के एक थोपा पानीसम्म पनि पाउँदैन थिइन् ।”
“धन्य छ मनिषा तिमीलाई । वास्तवमा वीर गोर्खालीकी छोरी भन्न त तिमीलाई सुहाउँछ । देशको सीमाको लागि यसरी निडर भएर आफ्नो कर्मक्षेत्र बिरुद्ध नै खुलेआम उत्रियौ । जसलाई तिमीले मौनताका साथ समर्थन गरेको भए पनि हुन्थ्यो अनि अहिले जस्तो यसरी आलोचित हुनु पर्दैन थियो । तर तिम्रो स्वाभिमानले त्यसो गर्न दिएन,” सत्यराज अगाडि लेख्छन्, “त्यसैले त तिमी धक फुकाएर बोल्यौ । र यो तिम्रो अदम्य साहसलाई कोटी कोटी प्रणाम गर्दछु ।”
हास्य कलाकार दीपकराज गिरीले पनि आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत मनिषालाई समर्थन गरेका छन् ।निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौलाले पनि मनिषालाई साथ दिएकी छिन् । उनले मनिषको कदमलाई समर्थन गर्दै लेखिएको समाचार फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन्, “आखिर हाम्रो मन त नेपाली हो सलाम मनिषा दिज्जु ।”नायिका करिष्मा मानन्धरले पनि मनिषा कोइरालाको समर्थनमा लेखिएको स्टाटस र समाचारहरु सेयर गरिरहेकी छिन् ।
नेपालले भारतले मिचेको भूमीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरे पछि बलिउड अभिनेत्री मनिषाले ट्विटरमा लेखेकी थिइन् “हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद । अब हामी तीन महान देशहरुबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौं ।”